नम्रताको कपालमा आँखा किन गयो ? – Mero Film
नम्रताको कपालमा आँखा किन गयो ?
अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठले प्रसाद फिल्ममा नक्कली कपाल लगाएकी छिन् । यो नक्कली कपालको खबर नम्रताले नै भनेर फैलिएको हो । जायरा फिल्मको लागि कपाल काट्दा उनले प्रसादका लागि कसरी काम गर्छिन् भनेर पत्रकारले सोधेका थिए । उनले नक्कली कपाल लगाउँछु भनेकी थिइन् । अनी खबर त्यसरी नै फैलियो ।
नम्रताको नक्कली कपाल लगाएको बिषयमा प्रसाद फिल्मको लै लै गीतको लिरिकल भिडियो आएपछि हल्ला भएको हो । दर्शकले गीत राम्रो भएपनि नम्रतालाई नक्कली कपालले नसुहाएको भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर, नम्रतालाई भने नक्कली कपालको हल्ला भएकाले कमजोरी कहाँ छ भन्ने कुरामा आँखा गएकाले त्यस्तो लागेको होला भन्ने लाग्छ । उनी, त्यहाँ केही कमजोरी भयो होला भनेर स्विकार गर्न तयार छैनन् ।
आफ्नो नक्कली कपालको बिषयमा खबर आएको, अरु कलाकारले पनि लगाउँदा खबर नआएकाले दर्शकले थाहा नपाएको भन्ने नम्रतालाई लागेको छ । तर, कमजोरी भएको होला भनेर स्विकार गर्न भने किन गाह्रो परेको होला ? साच्चै, नम्रताले नक्कली कपाल लगाएको त्यस्तो सुहाएको छैन नै ।
२०७५ असोज २९ गते १५:०० मा प्रकाशित
चर्चित पप गायक बलात्कार आरोपमा पक्राउ
दुर्गेश थापालाई संस्थागत बहिस्कार
निफ चौंथो संस्करणको विजेतालाई अवार्ड वितरण
उत्तम निरौलाको दाेस्राे कृति ‘सखिला’ सार्वजनिक
अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म फेस्टिभल (निफ)का विजेताले पाए पुरस्कार